Al-Shabaab oo weerartay fariisin ay leeyihiin ciidamadda Soomaaliya
By WARIYAHA JOWHAR , GAROWE ONLINE
Dhacdadaan ayaa kusoo aadeysa xilli uu baaritaan ku socdo dil wadareed loo geystay sideed qof oo shacab ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dagaalameyaasha Al-Shabaab ayaa lagu waramay in ay saaka weerareen fariisin ay ciidamadda milatariga Soomaaliya ku leeyihiin duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Illo wareedyo degaanka ah ayaa soo wariyey in weerarka uu isku rogay iska hor-imaad muddo socday oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, wallow aan la tirokoobin waxyeeladda guud.
Warbixinadda ayaa intaas ku daraya in ciidamadda dowladda ay iska caabiyeen duulaanka isla markaana ay dib u celiyeen maleeyshiyaadkii weerarka gadiska ah ku ekeeyay fariisimahooda barta kontarool.
Maamulka degmada Balcad oo xaqiijiyey dhacdada ayaa ka gaabsaday in uu bixiyo tafaasiil dheeraad ah "sabab la xiriirta macluumaad dhameystiran oo aan laga hayn khasaaraha dhanka xoogaga hubeysan".
Saraakiisha ciidamadda xoogga dalka ayaa guulo ka sheegtay dhacdadaas, wallow aysan soo hadal-qaadin khasaaraha dhinacooda ah.
Dadka degaanka ayaa u sheegay warsidaha Garowe Online in caruur ay kamid yihiin shacab waxyeelo ay kasoo gaartay weerarkaas. Caruurta waxaa lagu waramay in ay haleeshay rasaasta labada dhinac.
Ma jiro wax warbixin ah oo ku saabsan iska hor-imaadka oo kasoo baxay dhanka ururka gacansaarka la leh shabakadda Al-Qaacidda.
Weerarkaan ayaa wuxuu kusoo aadayaa xilli ay baaritaan ku socota dil wadareedka degaanka Gololey oo hoostaga degmada Balcad loogu geystay sideed ruux oo shacab ah, kuwaas oo aysan caddeyn cidda beegsatay.
Qiimaha la iibiyo Saacadda iyo Faraantiga uu wato Amiirka Shabaab
Soomaliya 06.11.2019. 07:26
Labaddan shey ayaa waxaa lagu arkay isaga oo xiran muuqaalkii u dambeeyay ee ay baahisay kooxdiisa.
Turkiga oo saanad ciidan oo balaaran ugu deeqay ciidanka Soomaaliya
Soomaliya 16.10.2019. 18:30
Farmaajo: Shisheeye aan Soomaali jeclayn baa taageera AlShabaab
Soomaliya 05.04.2019. 22:27
Turkiga oo ka hadlay is-miidaamintii lagu weeraray saldhiga Turk-Som
Soomaliya 23.06.2020. 17:20